विवेकहीन हठ नदेखाऊ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / सम्पादकीय / विवेकहीन हठ नदेखाऊ
Posted by: युगबोध in सम्पादकीय January 17, 2019	0 70 Views
नेपालको अन्तरिम संविधान २०७३ ले संशोधनमार्फत् संघीय शासन प्रणालीलाई स्वीकार गरे पनि त्यसको झण्डै एक दशकपछि मात्रै संघीयताको अभ्यास प्रारम्भ हुन सकेको हो । नेपालको संघीयताको अभ्यास नयाँ भएकोले यसको प्रयोगमा केही जटिलता वा अन्योल देखिनुलाई अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन । संघीयतालाई सिद्धान्ततः स्वीकार गरिए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान थुप्रै कानुनहरु निर्माण गर्न र व्यावहारिक प्रयोगमा आउने जटिलताहरु पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने गरी थुप्रै काम गर्न बाँकी छन् । प्रदेशसभाले तीनवटा प्रदेशको नाम र राजधानी तोके पनि चारवटा प्रदेशमा राजधानी र नामाकरणको टुंगो लगाउन बाँकी छ । यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई समयमै टुंगो लगाउन सक्नुपर्छ । भौगोलिक उपयुक्तता, पूर्वाधार विकासको संभाव्यता जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुको अध्ययन गरी भावी पुस्तालाई सफा, सुन्दर, स्वच्छ, हराभरा, मनमोहक शहर हस्तान्तरण गर्ने राजधानी तोक्नुपर्ने ठाउँमा म बसेकै घर आँगनमा राजधानी हुनुपर्छ भन्ने बालहठ प्रदर्शन गर्ने र त्यसमा जबर्जस्ती गर्न सडक प्रदर्शन गर्ने अभ्यास संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत कदम हो । तर अहिले त्यही गलत अभ्यास प्रारम्भ हुन थालेको छ ।
सामान्य नागरिकले आफ्नो नजिकै राजधानी खोज्नुलाई मानवीय कमजोरी मात्र मान्न सकिएला । तर जिम्मेवार राजनीतिक दल नै आयोजक बनेर राजधानी सार्न पाइँदैन भनेर सडक प्रदर्शनमा उत्रनु घोर लज्जाको विषय हो । बुटवलबाट राजधानी सार्न पाइँदैन भनेर नेपाली कांग्रेसले गर्न थालेको प्रदर्शन त्यही लज्जाको एउटा नमूना हो । यस्ता गलत उद्देश्य र नियतका साथ गरिने प्रदर्शनमा पार्टीका केन्द्रीय प्रवक्तासमेत उपस्थित हुने प्रचार गरिनु झनै लज्जास्पद क्रियाकलाप हो । यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ५ नंं. प्रदेशको राजधानी सार्ने विषय नै होइन । अब प्रदेशसभाले गर्ने निर्णय भनेको राजधानी तोक्ने हो । यो विषयमा प्रदेशसभाले कुनै निर्णय नै नगरेको सन्दर्भमा राजधानी सार्न थालियो भन्नु अल्पज्ञानकै परिणाम हो । प्रदेशसभामाथि दबाब दिन गरिने यस्ता प्रदर्शनहरु बुद्धि र विवेक भन्दा मुढेबल र दादागिरीका रुपमा भइरहेका छन् । सामान्य विवेक भएको कुनै पनि सभ्य नागरिकले यस्ता कुराको समर्थन गर्न सक्दैन ।
लोकतन्त्रमा आजको प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको भोलिको सत्ता पक्ष हो । नेपाली कांग्रेसको स्थानीय कमिटीले बुटवलमा आयोजना गर्न थालेको प्रदर्शन लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्कार विपरीत छ । सार्वभौम प्रदेशसभामाथि दबाब दिने यो चरित्र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत छ । यस किसिमको अति संकीर्णतावादी एवं स्वार्थपरक सोच राखेर गरिने राजनीतिबाट देश र जनताको भलो हुँदैन । प्रदेशसभा एवं प्रदेश सरकारलाई बलियो, प्रभावकारी र जनउत्तरदायी बनाउन सहयोग, समन्वय एवं हस्तक्षेपसमेत गर्न सक्ने हैसियत भएको शक्तिले सडकबाटै महत्वपूर्ण मुद्दाको फैसला गर्न खोज्नु दुःखद कुरा हो । यो भनेको विभिन्न भूगोलमा बस्ने नागरिकहरुलाई अपमान गर्ने, उनीहरुलाई लडाउने र संघीयतालाई कमजोर पार्ने गलत अभ्यास हो ।
पा“च नंं. प्रदेशका बाँके र बर्दियामा बस्ने जनताले समग्र प्रदेशलाई उपयुक्त हुने ठाउँमा राजधानी नतोकिए आफूहरु ६ नं. प्रदेश (कर्णाली प्रदेश) मा मिसिने र सुर्खेत राजधानी आफूहरुका लागि उपयुक्त भएको बताउँदै आएका छन् । ठूलो भूगोल, कृषिमा अग्रणी र पूर्वाधार विकासमा तुलनात्मकरुपमा अगाडि रहेका यी दुई जिल्लालाई पाँच नं. प्रदेशबाट अलग राख्ने सोच समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि अत्यन्तै घातक हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयनको अहिलेको महत्वपूर्ण चरणमा सबै पक्षले सुझबुझपूर्ण दूरदृष्टि राख्न सक्नुपर्छ । प्रदेश राजधानी तोक्दा कुनै पनि स्थान निर्विकल्प हुन सक्दैन । रुपन्देहीको विकल्प दाङ हुन सक्छ भने दाङको विकल्प अर्घाखाँची, कपिलवस्तु वा प्युठान पनि हुन सक्छ । त्यसैले अहिले भइरहेको प्रदर्शन दूराशयपूर्ण र स्वार्थकेन्द्रित छ । यो भनेको समस्या समाधान गर्ने बाटो होइन मूर्खता लाद्ने विवेकहीन हठ मात्र हो ।
संघीयता कार्यान्वयन एउटा पक्षको मनोमानी हठबाट हुँदैन । राष्ट्रिय सहमतिबाटै यी विषयहरु टुंग्याउन सक्नुपर्छ । यसमा कुनै एउटा दलको अर्घेल्याइ“ झनै राम्रो होइन । त्यसैले जस्तोसुकै दबाब आए पनि प्रदेशसभाले सहमतिबाटै विवेकपूर्णढंगले राजधानी र नामाकरणको विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । सहमति नभएको स्थितिमा दुई तिहाईको विकल्प छँदैछ । तर अन्तिम समयसम्म सहमतिका लागि सबै पक्ष इमानदार र प्रतिबद्ध रहेको स्थितिमा सहमति सम्भव छ । सहमतिको बाटो नै सबैभन्दा भरपर्दो र विवेकसम्मत हुनेछ ।
Previous: क्रान्तिकारीहरुले कहर काटेको गोलघर र माघीको रौनक !!!
Next: गरिब बालबालिकालाई न्यानो कपडा